Lahatsoratra | Vahiniala Radio
FandraisanaFandaharanaGrille TarifaireFandaharana voatahiryContactIza moa i Vahiniala Radio?Vaovao You are hereFandraisanaLahatsoratra
Fikajiana ny tontolo iainana: fanambin'ny Orinasa Ambatovy
Nanatanteraka fambolen-kazo tao Antanimietrikely, ao atsimon'ny faritra iasany Ambatovy ho isan'ny ezaka amin'ny fiarovana sy fikajiana ny tontolo iainana eny amin'ny faritra manodidina ny Toerampitrandrahana ao Moramanga. Karazan-kazo zanatany no novolena tamin’izany hatramin’ny 2011 nanombohan'izany hetsika izany miaraka amin'ny fanohanan'ny mpiasa ao amin'ny Toerampitrandrahana sy ireo mpiombontsehatra samihafa. Fihaonan'ny Mpanao Gazety UJIRT Tao Toamasina
Anisan’ny Fikambanana manana Mpikambana betsaka tokoa ny UJIRT na ny (Union des Journalistes Inter-Regional Toamasina). Aty amin’ny renivohitr’i Betsimisaraka no misy ny Foibeny. Ny Faritra Atsinanana, Faritra alaotra Mangoro ary ny Faritra Agnalanjirofo no mandrafitra izany fikambanana izany. Toy ny fanao isan-taona ary dia notontosaina ny talata 14 sy ny Alarobia 15 Febroary 2017 teto Toamasina tato amin’ny trano fivorian’ny Faritany ny Fihaonamben’ireo Mpanao gazety Mpikambana. FANATANJAHAN-TENA ANTSEKOLY 2016 : tsy diso anjara ny Mpianatra eto Andasibe Gara
Notontosaina anio Atalata 24 mey tamin’ny 3 ora tolak’andro teo ny fanomezana tso-drano ireo Mpianatra eto Andasibe hihazo an’ny Kaomina Ambohibary ao avaratra kely miala ny Kaomina andrenivohitra Moramanga. Samy nanefa ny adidiny teo avokoa ny chef ZAP, ny Mpampianatra, ny Ray aman-dRenin’ny Mpianatra ary ny solon-tena avy ao amin’ny Kaomina Andasibe tamin’ny fanomezana toromarika sy torohevitra madinidinika ho an’ireto Mpianatra ireto. ALA ATSINANANA SY NY HARENA AO ANATINY: “ho levona afaka fotoana fohy”.
Tsy hodiana tsy hita intsony amin’izao fotoana izao ny fahasimban’ny tontolo iainana vokatry ny filàna diso tafahoatra ataon’ny Malagasy. Fantatsika rehetra fa mandavorary ny fiainan’ny zanak’olombelona ny ala sy ny harena voajanahary ao aminy. Miezaka manao ny asa tandrify azy ireo karazana fikambanana maro na miankina na tsy miankina amin’ny Fanjakana. VOI Maitsoanala Andilamena : MIVAROTRA NY ALA AROVANY ANTSOKOSOKO
Malaza eran’izao tontolo izao ny fiarovana ny tontolo iainana. Tato ho ato moa dia ny resaka fiovaovan’ny toetr’andro no maresaka tetsy sy teroa. FANAKONA-MASOANDRO (Eclipse) 2016 eto Madagasikara
Anisan’ny tsara vintana isika eto Andasibe / Madagasikara amin’ny 01 septambra 2016 ho avy izao. Araka ny hitantsika eo amin’ny sary mihetsika, ireo ny faritra mahita amin’ny ampahany sy feno ny fanakona-masoandro 2016. Ireo izay handalovan’ny teboka mena kosa dia afaka mianoka izany feno tanteraka. "Miandrandra maraina" maro ireo nahazo loka!
Salama daholo isika mpihaino ny Onjampeo sy Mpitsidika ny tranokala. Maro dia maro tokoa isika mpihano no nandray anjara tamin'ny fifaninana tamin'ny alalan'ny fidirana mivantana, famaliana fanontaniana tamin'ilay tantara mitohy: Miandrandra Maraina izay mandeha isan'andro eto amin'ny vahiniala Radio. Tonga niara-nanentana taty amin'ny radio ny ekipan'ny Miandrandra maraina (Nasera, Lydia, Hery). Nafana ny lalao satria voafetran'ny fotoana dia nibosesika ireo mpiantso. Miandrandra maraina
"Miandrandra Maraina", tantara mitohy, arahanao ny Alatsinainy hatramin'ny alakamisy amin'ny 8ora alina. Famerenana ny Azoma amin'ny 8ora alina, eto amin'ny amin'ny vahiniala Radio 102.8 FM sy ny Web radio www.vahinialaradio.com Andasibe: Nahazo faritra arovana vaovao iray
Raha te hifandray aminay:
Tel: +261 34 06 817 12 / +261 34 18 085 88 / +261 34 36 182 36
Email: vahiniala_radio@yahoo.fr Fikarohana
votre site web en un clic.
Vita avy amin'ny Drupal © 2017 Vahiniala Radio All rights reserved.